I-Apt c Hot /Cold Air Suite +1Q ukuya kutsho kwi-6p (jonga + >2) - I-Airbnb
I-Apt c Hot /Cold Air Suite +1Q ukuya kutsho kwi-6p (jonga + >2)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguNarciso
IPalmas do Arvoredo GCR, Ulwandle olusele luphumelele izihlandlo eziyi-3 x zeBlue Flag, iilwandle eziliqela, iindlela, iBay of Dolphins,
I-Ap entsha, esebenzayo, isilwanyana sasekhaya samkelwe, ikhitshi elipheleleyo, i-wi-fi ekhawulezayo, i-pizzerias, i-restaur, i-superm, iivenkile zezinto ezibhakiweyo, iikhefi
I-Apto 2 dormit c/ air cond split , igumbi elinye, amagumbi okuhlambela ayi-2 anesiqingatha, indawo yokoja epheleleyo neyabucala, indawo yokuhlamba iimpahla, ipuli yokuqubha, iindawo zokupaka eziyi-2 02, enye egqunyiweyo, eyi-400 m ukusuka elwandle, ukuya kutsho kubantu abayi-6 (ukususela kwimilinganiselo eyi-4 yokubona) ngoMvulo,, into onokuyisebenzisa.
Indawo yokuhlala ifumaneka eRavador Celso Ramos, eSanta Catarina, eBrazil.
Unxweme lwasePalmas do Arvoredo luneflegi eluhlaza, eqinisekisa ukuba uhlamba kakhulu.
Sinendawo yokuqokelela ulwandle nenkunkuma nenethiwekhi yonyango. I-Interphone kunye ne-Electronic Door, i-Internet Tag key. Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu wahlula amagumbi omabini kunye negumbi elilala abantu ababini. I-smartvwagen TV eyi-43-inch, ISIBHAKABHAKA, indawo yokoja yangaphandle ye-AP enezitya, ifeni, i-ayini, isixhobo sokomisa iinwele, izinto zokondlula ibhedi kwigumbi ngalinye nemiqamelo engasetyenziswayo (kwimeko yeentsuku ezininzi zokutshintsha okanye zokuhlamba kunye egameni lomqeshi otyeleleyo),
. Iflethi ekhethekileyo enendawo yokungena elula kubantu abasebenzisa isitulo esinamavili nabantu abadala. Umgangatho wokuqala, akukho zitepsi.
4.96 · Izimvo eziyi-28
I-Santa Catarina, i-Palmas do Arvoredo Beach, 22 Figus Street, i-Ravador Celso Ramos, i-Apt 101,
Umbuki zindwendwe ngu- Narciso
Iimpendulo ezikhawulezileyo nge-Air Bnb App kunye ne-Messenger W okanye i-Tlgr ukuba ufuna ukufowunela u-48 91764 Narciso ( vivo whatsapp ) / 48 91843 Aline Whatsapp okanye 48 8464610 (Molo) Narciso Alexandre ufowunela kuphela.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Governador Celso Ramos